မျက်နှာပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကိုဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်မလဲ? - Pissaya News
ဆားဝက်ခြံထွက်တက်တဲ့ Pissaya ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဆားဝက်ခြံပျောက်ကင်းစေမယ့်နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက. . . မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ(ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း)၊ ရေ ပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်။
• ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးတစ်လုံးထဲကို မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ နဲ့ ရေကို ပြစ်ပြစ်လေးရောပြီးတော့ ဆားဝက်ခြံ ရှိတဲ့ နေရာကို သုတ်လိမ်းပြီး ခြောက်တဲ့အထိထားပေးပါ။ ပြီးရင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ ဒီနည်းလေး အတိုင်း တစ်ပတ်ကို နှစ်ခါလောက် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သက်သာပျောက်ကင်းလာမှာပါနော်။ စိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။
မွေးနေ့ကို သူရဲ့ မိသားစု၊ သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ၊ ရှုတင်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေဒွေး
အန္တရာယ်ရှိသောအချက်များကို လျစ်လျှူရှူထားခြင်း သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များခြင်း စတာတွေကိုမသိဘူးဆိုရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုပြီးပျက်စီးစေ ပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ နှလုံးရုတ်တရက်ရပ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်မှရောဂါရှိမှန်းသိပြီးတော့ ဒီအချိန် မှာအသိနောက်ကျနေ ပါပြီ။...
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကြက်ဥစားသုံးခြင်းရဲ့ရရှိလာမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေဖြစ်လာ မလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ကြက်ဥကိုကြော်စားတာပဲဖြစ်စေ ၊ ပြုတ်စားတာပဲဖြစ်စေ ၊ သုပ်စားတာပဲဖြစ်စေ ၊ ဟင်းချက်စားတာပဲဖြစ်စေ စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြက်ဥကိုစားလိုက် ပေမယ့် မိမိတို့ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုတွေအထောက်အကူပြုလဲဆိုတာကိုတော့ Pissaya...
သီရိလင်္ကာမှာ အရေးပေါ်ကာလအခြေအနေ သက်တမ်းတိုးမြှင့်
အွန်လိုင်းကနေ ဖြန့်ချိတဲ့ မိစန္ဒီရဲ့ သီချင်းသစ်